Plasma 5.2 inowanikwa, ngatione kuti chii chitsva [Yakagadziridzwa] | Kubva kuLinux
Ya isu tiri munguva nyowani yeKDE SC. Plasma 5.2 yakaburitswa nemabasa matsva uye akawanda mabug fixes, atichataura nezvayo pazasi.
1 Nyowani Plasma 5.2 Zvikamu
2 Shanduko iri munzira
3 Plasma 5.2 yekuisa manyore
Nyowani Plasma 5.2 Zvikamu
Iyi vhezheni yePlasma inouya nezvimwe zvinhu zvitsva kuita kuti KDE ive yakazara yakazara desktop.
Bluedevil: ichatibvumidza isu kubata mameseji eBluetooth. Tinogona kumisikidza mbeva yedu, keyboard, uye kutumira / kugamuchira mafaera, mukuwedzera pakufamba nemidziyo inoenderana neiyi tekinoroji.
KSSHAskPass: Kana isu tichiwana mamwe makomputa ne ssh, uye sezvazvinofanira kunge zvine musoro, mushandisi ane password, module iyi inotipa graphical mushandisi yekuisa password.
muon: Nechigadzirwa ichi (chatozivikanwa nevakawanda) tichakwanisa kuisa, kudzora software nezvimwe zvinowedzerwa pakombuta yako.
Kugadziriswa kweSDDM: SDDM ikozvino ndiyo yekuwana maneja wesarudzo yePlasma, kutsiva iyo yekare KDM, uye iyi nyowani Sisitimu yekugadzirisa System inokutendera iwe kumisikidza theme.
KScreen: ndiyo system yekumisikidza module yekumisikidza rutsigiro rwevakawanda monitors (ona mushure mufananidzo).
Chimiro cheGTK kunyorera: iyi module nyowani inokutendera iwe kumisikidza iwo madingindira eGnome kunyorera.
KDecoration- Raibhurari nyowani inoita kuti zvive nyore kugadzira madingindira eKWin zvakanyanya kuvimbika. Iyo ine inonakidza kuyeuka, kuita uye kugadzikana kugadzirisa. Kana iwe uchinge uchirasikirwa nechimwe chinhu, usanetseke, ichadzoka muPlasma 5.3.
Zvakare, ikozvino isu tinogona kugadzirisa chiito chekubvisa Widget muPlasma:
KRunner izvozvi zvine simba uye zvakarongeka kana zvasvika pakuratidza ruzivo rwatinoda, uye zvinototibvumidza kudzora mutambi wemimhanzi. Zvakare, ikozvino yakatangwa uchishandisa kiyi musanganiswa alt + Space.
KWin Inotouya neiyo nyowani theme iyo yatakatovona nekukasira uye isu tine seti nyowani yevatuki nemifananidzo inonzi Breeze (Brisa), kunyangwe mumaonero angu ichiri kushaya (ma icon) akawanda mafomu ekutsigira.
Kune vamwe vese, isu tine Widgets nyowani yedesktop, Imwe nzira yekushandisa menyu (Kicker) unogona kuisa kunyorera kubva kumenyu pachayo uye nekuwedzera ekugadzirisa mabasa. baloo iwe unowana optimizations uye ikozvino unoshandisa zvakanyanya kushoma CPU pakutanga. Muongorori wemubvunzo ane mashandiro matsva semuenzaniso kunyora "mhando: Audio" muKrunner uye kusefa mhedzisiro.
Mune iyo yekuvhara skrini, kusangana pamwe ne logind kwakagadziridzwa kuona kuti iyo skrini yakavharwa zvakanaka isati yamiswa. Iyo skrini yekumashure inogona kusetwa. Mukati inoshandisa chikamu cheWayland protocol, inova iro ramangwana reLinux desktop.
Iko kune kuvandudzwa mukubata akawanda monitors. Kodhi yekuziva yeakawanda monitors akakwanisa kuiswa ported kuti ishandise iyo XRandR yekuwedzera zvakananga uye akati wandei akanangana nemabhugi akagadziriswa. Izvi uye zvimwe zvigadziriso zvinogona kuonekwa mu Release Notes.
Shanduko iri munzira
Zvirinani muArchLinux isu tatova nemapakeji anonyatso nyatsoita yekare KDE 4.14, Kate, Konsole, mienzaniso miviri yazvo. Kunyangwe ye KDE4 marongero emushandisi achachengetwa mu ~ / .kde4 /, kune mafomu matsva avanochengetwa mukati ~ / .config / sezvo Arch Wiki.
Parizvino handina chokwadi kana Plasma 5.2 inogona kuiswa zvizere paArchLinux, kunyange ndichifunga kuti inogona. Gare gare tichakuunzira ruzivo nezvazvo uye kuti ungazviita sei kana zvichibvira.
Plasma 5.2 yekuisa manyore
Ini ndangoita yekumisikidza yekumisikidza kubva kuAntergos (isina graphical nharaunda) uye chaizvo izvi ndizvo zvinoda kuiswa kuitira kuti zvese zvishande zvakanyanya kana zvishoma zvine mutsigo:
KMix haisati yashanda hazvo. Izvi ndizvo zvazvinoita:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Plasma 5.2 iripo, ngatione kuti chii chitsva [Yakagadziridzwa]
Ndanga ndichiedza kushandisa shanduro dzekare muArchlinux, asi ndanga ndine matambudziko mazhinji kana kusapindirana, ndinovimba munguva pfupi inotevera zvichakwanisika kushandisa KDE Plasma mukugadzira.
Ini ndangoisa iyo ndichishandisa Antergos sechigadziko uye zvinosuwisa kuti zvichiri zvichienderana nezvinhu zvakawanda kubva KDE 4.14, senge Dolphin. Izvo zvichiri kushaya ..
Ini ndichamirira iyi yakura Kde 5 yazvino Kaos iri kuita zvakanaka ne kde 4.14.4
Zvakanaka, Anke anofungidzira kuenda ku kf5 pakupera kwaKukadzi, kuenda kungochengeta kf5 chete uye plasma 5, zvinomira kuchengeta kde 4.
Ruzivo rwakanaka nenzira ...
Kune zvinhu zvakaita seizvi ndinosuwa ArchLinux. Asi panguva ino ndinofarira KDE paFedora.
Uye unoita zvakanaka kuzviita.
Uye unoita zvakanaka kuzviita. Zvakare, unogona kuisa Plasma 5 paFedora.
Zvakanaka, ini ndanga ndisinganyatso kuziva nezve chii chaiitika kune angu arch kunyorera. Ini ndinoshandisa menyu yepasirese uye ndatova kwrite, kate uye konsole ndanga ndarasa. Ipapo ndakazoona kuti nei. Zvino, pane chimwe chinhu chakandibata uye kwaive kuziviswa kwaAndrea Scarpino https://www.archlinux.org/news/transition-of-kde-software-to-the-kde-framework-and-qt-5/ mairi inokurudzira kuchinjira kuPlasma 5.2 vhezheni.
Icho chiri zano rakanaka here kuchinjira kuPlasma 5.2? Kana zvirizvo, ndeipi nzira chaiyo yekuzviita? kana zvichave nani kuita yakachena kuisa?
Pamberi, ndinokuvongai zvikuru.
Ndine kusahadzika kwakati ... ngatione kana iwe uchiziva chimwe chinhu ...
Ko KWin yakamira yakamisikidzwa inoiswa?
Chii chichaitika kuDolphin uye pachave nekutsiva here?
Plasma inogona kuiswa isina Badoo?
Pindura kune escorponox
Zvakanaka, handisati ndaziva zvakanaka parizvino. Ona chirevo changu pamusoro .. 🙁
Zvinonzwika! Ndatenda neruzivo ... Slds!
KDE iri kuwana yakanaka kwazvo nekukasira izvozvi
Kwakanakisa kutaridzika, zuva rega rega KDE inovandudza. uye mashandiro asinga taure, akanaka kwazvo, ndinovimba kuti mazano e microsoft neapuro haabire mazano avo kubva ku kde.
Iyo yakanakisa KDE default dhizaini yandati ndamboona.
Ini handizive padanho rekushanda ... asi zvakandibata kuti zvinotaridzika zvakanaka nekukanganisa, kubva mandriva ini handina kuona chinhu chakangwarira
Ini ndicha ramba ndakamirira yakagadzikana vhezheni ye kde 5
kde4 ndiyo yakagadzika desktop iyo yandakashandisa ini handizoichinja izvozvi
Kune avo vako vanoshandisa Plasma 5, ko iyo gondohwe rinoshandiswa uchienzaniswa ne KDE 4.14?
Ivo vanotaura kuti kunwa kwakaderera zvakanyanya. Ini ndanga ndichiyedza iyo kwevhiki (iyo yapfuura, 5.1), uye ini ndakaona kuti yakapindura chaizvo, yakapa pfungwa yekuti yaive yakawanda kupfuura KDE4. Ehezve, ini ndaive neakawanda kwen uye plasma kukosheswa, uye zvakanaka, sezvo ini ndine komputa yekushanda nayo, nekuti kamwechete pandakaita chinhu chakakodzera ndokudzokera ku KDE4. Ini ndichaedzazve 5.2 kuti ndione kuti zvinoshanda sei. Asi ini ndinoona kuti ichiri kushomeka zvishoma kuti igadzikane seKDE4.
Inofanira kuzivikanwa kuti ichienzaniswa neKDE 4.14, plasma 5 inoshandisa yakawanda RAM.
Zvinondipedza nezve 10% ye4GB, saka inoshandisa yakawanda RAM. Asi kunyangwe zvakadaro, Arch yangu iri kuita nemazvo.
PS: Elav nemurairo ndinofunga wasiya pasuru «plasma», inosanganisira mamwe akakosha mapakeji. Zvirinani nezuro pandakaiisa, zvandakaita ndezvi:
sudo pacman -S plasma plasma-meta konsole kdebase-dolphin kate sni-qt breeze-kde4 k3b kdeutils-areka
… Izvi ndizvo zvakakura kudaro kde 4.14…. Ini ndaizoishandisa kusvika 2018 zvirinani. Damn rolling!
Ndakagadzira yakachena yeiyo 15.04, uye ini ndaive nematambudziko emifananidzo pamwe neNVIDIA GS7300 kadhi, yakapedza kuisa uye yakawana nhema screen. Ini ndaifanira kudzoreredza iyo 14.10.
Iwo matsva maficha anonyanya kukoshesa kune vazhinji vashandisi haapo pano, asi usazvidya moyo, ini ndinoaisa pamusoro.
- 150 MB ye RAM CHIDZIDZO chishandiso (vanhu vanodya zvakawanda imhaka yekuti vari kurodha KDE4 maraibhurari, tarisa)
- Kumhanyisa kunowedzera nezvose zvinokurumidza kunyorera. Mhedzisiro yacho ine hutsinye muChannel; Anofamba makumi maviri kusvika makumi matatu muzana nekukurumidza, achizviisa pasi.
Ndanga ndichiiyedza kakati wandei uye ini ndichiri kusakwanisa kuwana akawanda maidhoni patray kunyangwe ndichiita zvavanotaura mumaforamu. Zvinoitika kwauri, ini ndakazviisa kare uye hazvitombo chengetedza iyo gadziriso.
Mimwe mienzaniso, mega, bcloud, gore mail ru semuenzaniso.
Uye kumisikidzwa hakuna kuchengetedzwa, kana ndikabuda ndikapinda zvinoita sekunge ndangoisa zvekare. Icho chitsva uye chakachena chivakwa.
Kana ndikashandisa antergos mumuchina chaiwo ndinowana zvidhori zvese mutray, isa chero chandinoisa, chero.
Chimwe chinhu chakafanana chakaitika kwandiri nezuro. Zvandakaita kudzima mafaera ese ekugadzirisa kubva ku / kumba. Ini ndakadzorerazve uye voila, masetingi aishanda. Ini handina kuyedza iwo aunotaura, asi chero iwo anobva kuMEGA kana ndikauwana. Ini ndinokusiya iwe kubata. https://plus.google.com/118419653942662184045/posts/cfPeo35HQ4j
Sezvo ini kugadzirisa dambudziko neiyo NVIDIA GS7300 kadhi, haina kupindura Plasma 5, ine yakachena kumisikidza 15.04, inoramba iri pane nhema skrini.
Ndakaisa kubuntu 15.04 nePlasma 5.3 uye muvhiki randave ndichishandisa rakandirova kakati wandei. Ndakaona mamwe matambudziko kana ndichishanda nemaapk akati wandei akavhurika, libreofice + amarok + Firefox inoguma ichipa kuzunza uye kudzikira mukuchinja kwewindo.
Iyo software yekuvandudza yakavharirwa kwandiri kaviri chete.
Uye yakandikandira madhigi benzi mhando iyo yakaburitswa pamberi pe beta shanduro dzeUbuntu.
Kune rimwe divi, ndinonzwa hwema kusawirirana neFirefox, nekuti yakandipa matambudziko akati wandei.
Dzimwe nguva ndinonzwa senge system yangu inopunzika chero nguva hahaha.
Ini ndinogona kuisa Plasma 5 paLubuntu?